चलचित्र ‘दैलो’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक
Posted: 2018-10-05 13:16:49
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - चलचित्र ‘दैलो’को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै युट्यूब मार्फत चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।समाजमा हुने गरका विभिन्न सामाजिक ...
सेक्स गर्दा हुने यी १० महत्वपूर्ण फाइदा, जुन तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ
Posted: 2018-10-01 16:42:10
सुनाखरी न्युज/ एजेन्सी । हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । ...
Posted: 2018-09-29 06:58:24
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - यौन सम्पर्कको बेलामा प्राप्त हुने चरमसुख विषयमा विभिन्न सर्वेक्षणहरु भएका छन् । अहिलेसम्म भएका अध्ययन सर्वेक्षणहरुमा महिलाले यौनसम्पर्कका बेला सनतुष्टि नपाउने तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर यो पटकको अध्ययनले महिलालाई कसरी चरम सन्तुष्टि दिने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ ।...
Posted: 2018-09-28 15:55:38
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- दिनभरको दौडधुप र थकानका साथ घर पुग्दा कहिलेकाहीँ मनमा लाग्दो हो कसैले यसो हल्का मसाज गरिदिए कति आनन्द आउँथ्यो होला । कहिलेकाहीँ पार्टनरले यसो ज्यान थिचिदिँदा, टाउको मुसार्दा पनि क्या आनन्द आउँछ । थकान मेटाउने मात्रै हैन ज्यान चङ्गा बनाउनसमेत मसाज प्रभावकारी हुन्छ । मसाजले ज्यानबाट हराएको स्फुर्ति फर्किन्छ । मुड अन हुन्छ । तनाव हराउँछ । यो त भयो सामान्य मसाजको फाइदा । यसमा पार्टनरबाट कामुक मजास पाउन सकियो भने झन् के होला ? गर्ने हो त ? ल यी उपाय अपनाउनुस् न । त्यत्ति गाह्रो पनि छैन ।...
नेपाली हलमा एकसाथ तीन चलचित्र प्रदर्शनमा
Posted: 2018-09-28 11:26:26
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ - आज (शुक्रबार) बाट तीन नेपाली चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । ती चलचित्र हुन्, कथा काठमाडौं, अनुराग र छिरिङ । ...